Izivumelwano zabasebenzi zentsimbi eSpain | Ezezimali
Izivumelwano zabasebenzi zokudityaniswa kwesinyithi eSpain
USusana Maria Urbano Mateos | | Ngqesho
Uthethathethwano lwezivumelwano ezihlangeneyo ube ngumba obalulekileyo ekufuneka uthathelwe ingqalelo ngabasebenzi abaphatha lo mbandela ngokwahlukeneyo imisebenzi yomsebenzi kwaye ifumene udumo ngenxa yokuba zingxoxo ezixoxwa kakhulu ngabathethathethwano kwaye zithatha ixesha elide ukufikelela kwisivumelwano, de zibe zisayinwe.
Zizivumelwano zabasebenzi Abaphetheyo ngokulawula nokusetyenziswa kwentsimbi kwiindawo ezahlukeneyo elizweni, ezicwangcisiweyo nezilungiselelwe ngabathethathethwano abohlukeneyo kulo mmandla kwaye bafikelela isivumelwano sobabini ngexesha elichaziweyo.
El Eyona njongo iphambili yile: yenza lula i Ukuxoxisana ngokudibeneyo kwicandelo lesinyithi, Injongo ezibekwe yimibutho yabasebenzi nabaqeshi, yiyo loo nto betyikitye isivumelwano esaziwa njengemvumelwano yezemveliso zentsimbi, uxwebhu olubandakanya uthethathethwano ngemicimbi efanayo yokulawula umngcipheko emsebenzini kunye namanyathelo okulingana ngaphakathi kweenkampani, nezishiya okwangoku, kwinqanaba lephondo, eminye imiba efana nomvuzo okanye umbutho womsebenzi.
1 Kutheni le nto kukho isivumelwano sokulawula ukusetyenziswa kwezinto eziqhelekileyo?
2 Yintoni elawulwa ngokukodwa ngaphakathi kwezivumelwano zentsimbi?
2.1 Isivumelwano sokuqala selizwe seshishini, itekhnoloji kunye neenkonzo zecandelo lesinyithi eSpain
3 I-CCOO icinga ntoni ngayo?
4 Izizathu ezithintele isivumelwano esidibeneyo
Kutheni le nto kukho isivumelwano sokulawula ukusetyenziswa kwezinto eziqhelekileyo?
Iindlela zekhontrakthi, iiyure zokusebenza zonyaka kunye neemeko zokulingana; Le yeminye yemicimbi ethi, ukusukela ngoku, abaqeshi bentsimbi kunye nemibutho yabasebenzi baya kuxoxa kube kanye, xa kuthelekiswa namaxesha amathathu ngaphambili: kwizivumelwano zaseHuesca, Teruel naseZaragoza.
Oku kuya kunceda yenza lula kwaye idibanise iingxoxo, kuba kule miba yayiqhelekile, kwaye ukongeza ekubeni yayiqhelekile yayingeyonjongo yongquzulwano, kodwa yayiyingxoxo yephondo yezivumelwano.
Imiba efana nomvuzo okanye ixesha elongezelelekileyo lihlala likwinqanaba lephondo. Ngesivumelwano sesakhelo se Icandelo lesinyithi le-Aragon Inyathelo lokuqala eliya kwikamva liphawulwe, ukuze ngenye imini kubekho isivumelwano phakathi koluntu. Icandelo elibandakanya phakathi kwezinye ishishini leemoto, isiseko, imibhobho okanye iivenkile zokulungisa, kwaye eliqeshe abantu abangama-40.000 eluntwini. Amaphepha ayongezwa kwisivumelwano kancinci kancinci ukugubungela izihloko ngakumbi nangakumbi.
Iindibano ezahlukeneyo ezenziweyo kulawulo nolawulo lwemisebenzi eyahlukeneyo enxulumene ukusetyenziswa kwesinyithi kwimimandla eyahlukeneyo, Baze kusebenza ngendlela elungileyo kunye nesizathu esikhulu sothetha-thethwano olwenziwayo ukulawula amalungelo obugcisa, kunye noxanduva lokuba umntu abe ngumsebenzi kwaye aphathe izinto ezinje ngesinyithi.
Izivumelwano ezahlukeneyo ngokudibeneyo inxulumene nommiselo wokusetyenziswa kwesinyithi njengolawulo kulawulo lwentsebenzo yemisebenzi eyahlukeneyo, enjengokufaka imibhobho yamanzi, izixhobo zentsimbi, ubucwebe, ukukhanya, njalo njalo.
Ngokucacileyo kukho ukufana kwi iindibano zesinyithi ezahlukeneyo ezityikityiweyo ngabathethathethwano, kwaye oku kufana okumangalisayo, kodwa kufuneka sichaze ukuba umahluko ubalasele ngokukodwa phakathi kweendawo ezahlukileyo apho ezi zivumelwano zenziwe zaze zatyikitywa.
Yintoni elawulwa ngokukodwa ngaphakathi kwezivumelwano zentsimbi?
Kukho imigaqo eyahlukeneyo kunye nemvumelwano eyahlukeneyo ekuxoxwa ngayo kuthethathethwano ngokubhekisele ku izivumelwano ezihlangeneyo, ezinceda ukulawula ngokusondeleyo kunye nokulawula imisebenzi apho isinyithi sidlala indima ebalulekileyo. Eyona nto ifunwayo ikakhulu kukulawula ukusetyenziswa, iimeko ezenziwa kuyo imisebenzi, imveliso kunye nexesha lemveliso, konke oku ukuze umsebenzi alandele le mithetho kwileta ukuze akhuseleke nanini na kusenziwa umsebenzi okanye umsebenzi.
Abasebenzi kufuneka babe nolwazi olunzulu ngezi izivumelwano, imigaqo yazo, ukusebenza kunye nexesha ekufuneka zizalisekisiwe ngalo. Izivumelwano ezahlukeneyo zabasebenzi zibhekisa kwiimeko ezahlukeneyo, kwaye kuxhomekeke kwindawo okanye indawo apho umsebenzi akhoyo, isicelo okanye ubunyani besivumelwano sabasebenzi sohlukile.
Isivumelwano sokuqala selizwe seshishini, itekhnoloji kunye neenkonzo zecandelo lesinyithi eSpain
Ityikityiwe Isivumelwano sokuqala seshishini, enceda ukuqinisa ukuxoxisana ngokudibeneyo kwimimandla eyahlukeneyo yelizwe.
Izivumelwano ziya kuba nokusebenza kwazo koqobo, oku ngaphandle kwesivumelwano esibonisa ukuba ukuqhubeka kwabo kulinganiselwe.
Ndincediswa yile intsha Isivumelwano sabasebenzi kwicandelo lesinyithi, Iya kuba kukuqinisekisa ukuba imivuzo kuyavunyelwana ngayo kwisivumelwano ngasinye kuxhomekeke kwingingqi esityikitywe kuyo, oku kuluncedo kwimeko apho isivumelwano siyayeka ukusebenza kwaye ukusebenza kwayo kuyaphelelwa, ngale ndlela abasebenzi baya kuqhubeka nokufumana isivumelwano sabo umvuzo ngaphandle kwengxaki.
Oku kuyanceda abasebenzi bakhuselekile kulo naluphi na uhlobo lokucalucalulwa Kwimeko apho umvuzo wabo obekuvunyelwene ngawo ngaphambili ungahanjiswanga, kunye nenkxaso kwiinkampani ezahlukeneyo ezijongene nokubonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo kubathengi, ithuba lokuthetha-thethana kunye nokufikelela kwizivumelwano ezinceda onke amaqela ukuba aneliseke zizivumelwano eziza kwenziwa.
UGT uyakhankanya ukuba ukutyikitywa kwesivumelwano loloyiso olumangalisayo kwaye bakuthatha njengebango eliyimbali emanyanisweni, nto leyo eya kuthi incede abasebenzi ukuba baphuhle ngcono kwicandelo lesinyithi.
I-UGT ikwakhankanya ukuba, "Ibandakanya imiba yenoveli enje nge-ultra-activity okanye ubunyani ekuvunyelwene ngabo kwizivumelwano zenqanaba elisezantsi, ezingavumeli sivumelwano ukuba sehle, sikhupha into eyamkelweyo kuhlaziyo lwezabasebenzi."
I-CCOO icinga ntoni ngayo?
I-CCOO ibonakalise ukoneliseka kwesi sivumelwano sitsha. I-CCOO ikwinkqubo yokwenza isivumelwano esifanayo ixesha elide, ukukhangela amaphondo kunye nabasebenzi ukuba bakhuselwe kwimiba eyahlukeneyo enxulumene nomsebenzi kunye nokusebenza ngaphakathi kwishishini lesinyithi eSpain.
Ngokuqinisekileyo intsha Ingqungquthela yentsimbi Linyathelo elibaluleke kakhulu kolu shishino, nangona iseyide indlela ekusafuneka ihanjwe, ukusuka apha siqala ukufikelela kuthethathethwano olungcono kwixesha elizayo, kwaye le yimeko eyamkelwe yiCCOO kubalulekile ukuba uyiqaphele.
Amanye amanqaku abalulekileyo ngaphakathi kwe- Isivumelwano sabasebenzi.
Isivumelwano sisekiwe saza satyikitywa ngokubhekisele Umvuzo omncinci licandelo lephondo, oku kuchazwe kwisivumelwano sephondo ngalinye. Into ebalulekileyo apha kukuba, ngaphandle kokuba isivumelwano sephondo sichaphazelekile kukusebenza okanye ixesha lesivumelwano, baya kuqhubeka nokubonelela umvuzo oqhelekileyo kubasebenzi nabasebenzi ababhinqileyo kulo mmandla, ukuthintela abantu ekuchaphazelekeni yimeko enje kwezi abangaziqapheliyo unobangela.
Imida engqingqwa yenziwe ngokubhekisele kwiziphumo ezithile ezibangelwe lutshintsho kubasebenzi ngo-2012, isivumelwano sithintela ukwanda kwezivumelwano zeenkampani ezininzi.
Olunye ubuchule obusetyenziswa yi ikhomishini edibeneyo yesivumelwanoOku kunceda iingxoxo ezihlangeneyo zecandelo ukuze zihlale zisebenza.
Kwisivumelwano ukulingana kuqinisekisiwe kubo bonke abasebenzi, nokuba sesini na, ubudala, ubuhlanga okanye ubuhlanga umntu alapho. Kuthathwa amanyathelo afunekayo ukuze le mimiselo izalisekiswe ngokuchasene nokucalulwa kwabantu nokuba bangobani na.
Izizathu ezithintele isivumelwano esidibeneyo
Ezinye zezizathu eziphambili ezibangele ukulibaziseka ekusayineni izivumelwano zisonjululwe kwangoko. Nangona kunjalo, kukho ezinye ekwakunzima ukuzilungisa.
Impixano ibangelwe ngenxa yomahluko kwimivuzo efanayo yayisesinye sezizathu ezibangele ukungavisisani phakathi kwezivumelwano, kunye nommiselo wobudala, ukusukela nge-2015 kaJanuwari ka-2007 kwabakho isongezelelo sobudala kwaye kwavunyelwana ngaso ukusukela Unyaka ka-XNUMX.
Emva konyaka kunye neenyanga ezimbini zothethathethwano kunye neentlanganiso ezininzi, isivumelwano senzekile esikhokelela ekutyikityweni kwesivumelwano esidibeneyo. Ityikityiwe ziikhomishini zabasebenzi, egwetyelwa yi-CCOO, ene-70% yothethathethwano.
Icandelo lesinyithi sele linesivumelwano esitshaEmva kokutyikitywa yimibutho yabasebenzi, esi sivumelwano siquka ukonyuswa kwemivuzo kubo bonke abasebenzi abakwiidolophu okanye amaphondo ahlukeneyo aseSpain, into leyo ekubonakala ukuba ibinomdla omkhulu kwabo bantu basebenza kwicandelo lezinyithi.
El Isivumelwano sesinyithi ichaphazela ngokuqinisekileyo abantu abaninzi, abasebenzi abaninzi ababandakanyekayo
Imisebenzi eyahlukeneyo kwicandelo lezinyithi, kunye nokonyuswa kwemivuzo kunye nokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu, ubomi obungcono buqinisekisiwe kubasebenzi ukusukela oko kusayiniwe izivumelwano.
Izivumelwano ziya kwenza ukuba kubenakho ukubuyela kwimeko entle yokusebenza ukuze kufakwe ii-odolo ezintsha kunye nokunyusa ukuhlawulwa kwamatyala. Ezi zivumelwano ziya kubeka iziseko zothethathethwano olutsha kwixesha elizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Izivumelwano zabasebenzi zokudityaniswa kwesinyithi eSpain
Ngaba ukufuna izabelo eziphezulu kuyinzuzo ekugcineni kwethu?
Ixabiso elinokubakho okuninzi kokukhula